Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Mir Aimal Kansi
5tii Janaayo, 1993, Mir Aimal Kansi wuxuu dilay laba qof wuxuuna dhaawac joogta ah u geystay seddex qofood oo kale. Daan-daansi la’aan iyo si kedis ah ayuu weerarka qaaday, wuxuuna rasaasta qorigiisii AK-47 ku furay baabuurtii hor taagnayd nalka taraafikada ku yiil ka soo horjeedka xafiisyada Xarunta Dhexe ee Sirdoonka (Central Intelligence Agency).
Islamarkiiba weerarka kaddib, Kansi wuxuu ka baxsaday dalka Mareykanka wuxuuna baxsad ku jiray tan iyo markii lagu qabtay dalka Pakistan. 10-kii Noofembar, 1997, koox xeerbeegeyaal ah ayaa Kansi ku xukumeen magaalada Fairfax, Virginia, lagu xukumay dilkii laba qof oo u shaqeyn jiray CIA-da. Waxaa Kansi la dilay 4-tii Noofembar, 2002.
Macluumaadka la helay, waxay suurageliyeen in shakhsiyaadka soo socda, oo ka tirsan kuwo kale oo badan, in maxkamad la soo saaro: